पहाडियामा शासकीय र मधेशीहरुमा दास मनोवृत्ति छ: मात्रृका यादव | Madhesi - United We Stand
पहाडियामा शासकीय र मधेशीहरुमा दास मनोवृत्ति छ: मात्रृका यादव
September 21, 2006 at 10:17 pm Leaveacomment
हामी मान्दैनौं। मधेशी जनता यसपालि कुनै पनि शर्तमा मान्न तयार छैनन् । अल्मलाउने कोसिस गरियो भने त्यसको परिणाम सत्ताधारीहरुले भोग्नुपर्ने हुन्छ।
मधेशमा यसपूर्व पनि धेरै पार्टी संघसंस्थाहरु खुलेका छन्। यी संस्था र माओवादीको मान्यतामा के फरक छ ?
गुणात्मकरुपमै फरक छ। अरु संगठनको त कुरै छाडिदिउँ, अहिले त सबै पार्टीले मधेश आफ्नो हातबाट जाने डरले मधेशमा आफ्ना आफ्ना फोरमहरु बनाउन थालिसकेका छन्। हामीले कुरा राख्दै आएका छौं­- जबसम्म नागरिकता दिइँदैन, संविधानसभा बहिष्कार गर्र्छौं। त्यसपछि सबै पार्टीले बुझ्न थालेका छन्। हामी केही दिनअघि केही पार्टी नेताहरुसँग बसेका थियौं, नागरिकताको सवालमा सबै सहमत भएको देखियो किनभने सबैलाई मधेशीहरुको भोट चाहिएको छ। कोही पनि नेताहरु मधेशीको भोटबिना, मधेशीको प्रतिनिधित्वबिना र मशेशीको टाउकोमा नचढिकनमाथि पुग्न सक्दैनन्। अहिलेसम्म मधेशीहरुको काँधमा चढेर उनीहरुले शासनसत्ता चलाए। मधेशीहरुको हितमा कुनै पनि काम गरेनन्। पहाडिया सत्ताले त लुट्यो, लुटयो मधेशीहरुलाई, मधेशी शोसक, सामन्त, सुद्खोरहरुले पनि त लुटेका छन्। त्यसको बारेमा ‘कन्सेप्ट‘ अझै पनि ‘क्लियर‘ छैन नेताहरुमा। जयकृष्ण गोइतहरु त अझ पहाडियाहरुलाई लखेट्नुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छन्। हाम्रो धारणा छुट्टै छ।
जयकृष्ण गोइतको कुरा गर्नु भो, त्यत्रो संर्घष गरेर सँगसँगै जानुभयो तपाइँहरु। गोइतले किन छुट्टै मोर्चा खोल्नुपर्‍यो?
त्यसबारे त पहिले उहाँलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्थ्यो। कुरा के भने­­- उहाँलाई प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष बनाउनुभयो साथीहरुले। कार्यकर्ताहरुले त्यसबेला उहाँलाई रुचाएका थिएनन्। सरसल्लाह गरेपछि– उहाँ वृद्ध हो, मधेशमा एउटा लिडर स्थापित गर्नुछ भन्ने सहमति भयो। म त्यो बेला जेलमा थिएँ तर उहाँले काम गर्न सक्नुभएन र पार्टीले मातृकालाई अध्यक्ष बनाउने भनेर निर्णय गर्‍यो। उहाँको प्रवृत्ति ठीक छैन, भाग्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। जब उहाँलाई अध्यक्षबाट सल्लाहकारमा ल्याइयो, त्यो बेलादेखि उहाँले बाटो खोज्न थाल्नुभयो र उहाँलाई एउटा मौका के मिल्यो भने म गिरफ्तार भएँ। म गिरफ्तार भइसकेपछि मधेशीहरुलाई अपहेलना गरेकोले हामीले बिद्रोह गरेका हौं भनेर उहाँले भन्नुभएछ। जब म छुटे, अनि मैले आहृवान गरें। म सप्तरीमा गएको थिएँ, उहाँका ६ जना कार्यकर्तालाई हाम्रा साथीहरुले समातेर राखेका थिए। उहाँहरुलाई छोड्दिनुस्, यसले सम्वादको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर मैले साथीहरुलाई भनें। गोइतले यसलाई पोजेटिभ भनेर पनि भन्नुभयो तर मैले धेरै प्रयास गर्दा पनि उहाँ वार्ताका लागि तयार हुनुभएन। माओवादीले हाम्रो पार्टीलाई मान्यता देओस्, वार्ता टोली बनाओस् भन्ने उहाँहरुको चाहना रहेछ, मैले त्यो सबै पछिको कुरा हो, अहिले कमसेकम एकपटक भेटौं न त भनें। अस्तीमात्रै हाम्रा दुई जना कार्यकर्तालाई मारियो। अहिले उनीहरुका पर्चा हेर्नुभयो भने मधेशी वनको कुरा उठाइएको छ। सरकारको नभएर माओवादीकै विरुद्धमा यो कार्यक्रम ल्याएका छन् उनीहरुले। अहिले हामीलाई के शंका लागिरहेको छ भने कतै उहाँहरु कसैको गोटी बनेर प्रयोग त भइरहनुभएको छैन ?
माओवादीभित्र पनि नेतृत्व पंक्तिमा तिनै पहाडी मानसिकतावाल मान्छेहरुले पुरातन सोच लाद्न खोजे, जसमा मातृका यादव लचिलो भएकाले सहनुभयो तर गोइतजी अलि कडा र आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहेका कारण टिक्न नसकेर अलग्गिनुभो भनेर भनिन्छ नि ?
निश्चितरुपमा गोइतजी र ममा फरक छ। म लचिलो होइन, मलाई पार्टीमा कडा नै भन्छन्। म गलत चिजको विरोध गर्नेमा कडा छु भने सही चिजको र्समर्थन पनि गर्छु। उहाँमा के छ भने फरक विचार हुँदैमा कसैसँग बोल्न पनि रुचाउनुहुन्न। उहाँलाई भक्त र दास चाहियो। उहाँको कुरामा ‘अँ‘ भन्ने मान्छे चाहियो। हाम्रो पार्टीभित्र थुप्रै साथीहरुसँग वैचारिक संघर्ष हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा म एक्लै केन्द्रीय समितिमा छु।
पार्टीमा मधेशीहरुप्रतिको भावना कस्तो छ ?
हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पहाडी भन्न मिल्दैन। हाम्रो अध्यक्षलाई बाहुनको छोरा भन्न मिल्दैन। उहाँ त पूरै र्सवहारावर्गको नेता भइसक्नुभएको छ। र्सवहारावर्गको नेता भएर उहाँले नेपालको मुक्ति आन्दोलनमा मधेशको निर्णायक र रणनीतिक महत्व छ भनेर किटान गर्नुभएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जवर्जस्तरुपमा उहाँले वकालत गर्दै आउनुभएको छ र नीति पास गराउनुभएको छ। पहाडियामा शासकीय प्रवृत्ति छ, मधेशीहरुमा दास मनोवृत्ति। ती दुइवटै प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीका लागि खतरा हुन्। यो हाम्रो पार्टी अध्यक्षको निक्र्यौल हो। मधेशीहरु आफ्ना बाबु, दाइलाई सम्मान गर्दैनन् तर पहाडियाहरुलाई हजुर, हजुर भन्दै ढोग्छन् त्यो दास मनोवृत्ति हो। हाम्रो पार्टीभित्र र्सवहारावर्गीय जुन विचार छ, त्यसले पहाडियाहरुको शासकीय प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म खतम पारेको छ। हामी दास मनोवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अध्यक्षले पटक पटक भन्दै आउनुभएको पनि छ। कुनै पनि मोर्चाको बैठकमा उहाँ त्यत्ति जानुहुन्न तर मधेशको बैठक वा सम्मेलन भयो भने उहाँ आफै जानुहुन्छ।
माओवादीभित्र पनि पहाडे–मधेशीको द्वन्द्व छ, बेलाबेला कार्यकर्ताहरुमा पनि बिद्रोह देखिन्छ नि ?
त्यो त स्वाभाविक हो। समाजमा द्वन्द्वहरु त रहन्छन् नै।
निश्चित सिद्धान्तमा प्रशिक्षित भएका कार्यकर्ताहरुमा पनि यस्तो देखिन्छ भने…
जुन कार्यकर्ताले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र प्रचण्डपथको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ, त्यसमा यस्तो प्रवृत्ति पाइँदैन। जसले ती सिद्धान्त बुझ्न सकेको छैन र व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन, त्यसैमा यस्तो प्रवृत्ति पाइनु स्वाभाविक हो। हाम्रो पार्टी त्यसमा पनि परिमार्जन गर्ने प्रयासमा छ र पहिलेको भन्दा अहिले धेरै फरक पनि भएको छ। पहाडियाहरुमा भएको शासकीय प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो आन्दोलनका लागि बढी घातक छ।
मधेशीहरुमै पनि एक किसिमको द्वन्द्व देखिन थालेको छ जस्तो ‘यादव भर्सेज अन्य जाति‘ भनेर। यो चाहिँ कस्तो हो?
रुपमा त्यो हो, सारमा चाहिँ त्यो होइन। गलत तत्वहरुले विभिन्न गलत मुद्दा उठाएर वास्तविक विचार र व्यवहारको लर्डाईंलाई अन्त मोड्न खोज्छन्। त्यहाँ पनि केही अराजक तत्वहरु अहिले पनि पार्टी विरोधी काम गर्दैछन्, त्यसलाई त्यहाँको जनमुक्ति सेनाले नियन्त्रण गर्न खोज्यो। अलिकति हातपात पनि भयो भनेर सुने, त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो। मधेशमा एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ तर कसले गरिरहेको छ भन्ने बारेमा पार्टीभित्र खोजिनीति भइरहेको छ। अहिले दलित–गैरदलित, थारु–मधेशी, यादव–गैरयादव जस्ता विभिन्न किसिमका झमेलाहरुको उठान भएको छ। यसमा हाम्रो पार्टीकदम गम्भीर छ। त्यसलाई हाम्रा अध्यक्ष लगायत सबै बीचमा छलफल भइरहेको छ।
मिडियाले पनि यसमा कुनै भूमिका देखाउने गर्‍या छ ?
मिडियाको त प्रमुख भूमिका हुन्छ । मिडिया यति पूर्वाग्रही छ कि मधेशको नाममा म पनि उच्चारण गर्न चाहँदैन। जब मधेशको खिल्ली उडाउनु छ, नकारात्मक चिजको प्रचार गर्नु छ, त्यतिबेला नेपाली सञ्चारमाध्यमले खुब लेख्छन्। तर मधेशी सवाल, मधेशीहरुको हक अधिकारबारे केही पनि लेख्दैनन्। म त भन्छु– पहाडिया शासकीय प्रवृत्तिको नेपाली मिडियाले राम्ररी प्रतिनिधित्व गरेको छ।
अहिलेको आन्दोलनमा जनतालाई उठाउने र विशेष परिस्थिति निर्माण गर्ने काममा मिडियाको ठूलो हात छ भनिन्छ, तिनै मिडियाकर्मीहरु अहिले पनि सक्रिय छन्। अहिले हामी नेपालको पुनःसंरचनाको दिशातिर उन्मुख छौं र मिडियाकर्मीहरुको यही गति भयो भने यसले नेपालको पुनःसंरचनामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला ?
मिडियाहरुको यही रवैया रहृयो भने, मधेशीहरुका सवाल ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्दैन र मधेशीहरुका सवाल छायाँमा पार्ने प्रयास मिडियाले गर्‍यो भने नेपालको पुनःसंरचना हुन सक्दैन। नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैन। त्यो बेलामा मिडियाप्रति मधेशमा नकारात्मक धारणा बन्यो भने त्यहाँ रहेका कुनै पनि पत्रिकाका क्षेत्रीय कार्यालयहरुको त उठिबास लाग्छ। मधेशीहरु यसप्रति एकदम आक्रोशित छन्। मैले चुनौती दिन खोजेको होइन। यदि मिडिया ठीक ढंगले गएन भने, मधेशका आवाजको मिडियाले कदर गर्न सकेन भने मधेशमा बहिष्कारको नारा उठ्छ।
निजीस्तरबाट चलेका भन्दा जनताको करबाट चलेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र जस्ता सञ्चारमाध्यमको बढी अधिकार हुन्छ नि यसमा ?
यसमा सरकार त झन ‘बायस्ट‘ (पूर्वाग्रही) छ । मिडियाले त आफूलाई प्रजातान्त्रिक, निष्पक्ष भनेर खुब भन्छन् नि। मिडिया त प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष हो राज्यको सवालमा। तर मधेशको सवालमा मिडियाले पनि शासककै भूमिका खेलेको छ। अरु सवालमा प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक देखापर्ने तर मधेशको सवालमा पूरै सामन्ती खालको प्रवृत्ति देखिएको छ जसले मधेशको बारेमा बोल्न चाहँदैन। भोलि मिडियाले मधेशको आवाजलाई सुन्न सकेन भने त्यसको नराम्रो परिणाम निस्कनसक्छ। मधेशी जब जाग्छ, त्यसबेला हरेक क्षेत्रमा प्रहार हुन्छ।
मधेशीहरुका आवश्यकता, पीडा र नयाँ मधेशको परिकल्पना समान हुँदाहुँदै पनि विभिन्न राजनीतिक दल, चिन्तनशील व्यक्ति र संघसंस्थाहरु एउटै मञ्चमा आएर एउटै आवाजमा किन बोल्न सकिरहेका छैनन्?
मधेशीहरुमा दास मनोवृत्ति कायम छ। आत्मनिर्णयको अधिकार, गणतन्त्रको कुरा गर्‍यो भने पार्टीबाट निष्काशन हुने डर छ। मधेशीहरुको अधिकार र मुक्तिको सवालभन्दा पनि आफ्ना फाइदाको लागि सोच्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित छन् उनीहरु। मधेशप्रतिको उपेक्षापूर्ण नीतिले गर्दा पार्टी क्रान्तिकारी बन्न सकेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा मधेशको मुक्ति संभव देख्नुहुन्छ ?
१९ दिनको आन्दोलनले के देखाइदियो ? सात राजनीतिक दलको के एजेण्डा थियो, जनताले के देखाए ? तानाशाही राजाको बैशाख ८ गतेको घोषणालाई सारा विश्वले र्समर्थन गर्‍यो, पार्टी पनि लर्बराउन थाले। आखिर जनताको विजय भयो। जुन पार्टीबाट व्यक्ति, संस्थाले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ, कदर गर्छ, ऊ प्रगतिको बाटोमा जान्छ। जुन पार्टीले जनताको आवाजको वेवास्ता गर्छ, जनविरोधी काम गर्छ, आज ठूलो भए पनि भोलि ध्वस्त हुन्छ। कम्युनिष्ट सत्ताहरु ध्वस्त भएको देख्नुभएको छैन ? कम्युनिष्ट शासकहरुले जब गल्ती गरे, तब जनताले नै पल्टाइदिए, यी राजा, पूँजीवादी र सातदलको त कुरै छाडिदिउँ। जनताले कुनै बन्दुकको बलमा त पल्टाएका होइनन् नि। अहिले मधेशमा ठूलो जागरण आएको छ। यो १० वर्षा मधेशीहरुले पनि रगत बगाए। १२ हजार नेपालीहरुले रगत बगाए। त्यसैले मधेशीहरुमा पनि ऊर्जा पैदा गरेको छ, नयाँ चेतना जगाएको छ। उनीहरु पनि आफ्नो मुक्तिप्रति सचेत छन्।
माओवादी संविधानसभामार्फत संघीय गणतन्त्र ल्याउन चाहन्छन्। मधेशको लागि कस्तो खाका छ माओवादीको ?
मधेशीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।
मधेशीहरुलाई कतिवटा राज्यमा बाँड्ने योजना छ ?
एउटा सिंगो मधेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हरेक भाषाभाषीहरुको प्रतिनिधित्व गराउने, हरेक भाषभाषीको अधिकारको संरक्षण गर्ने। यो सबै मधेशीहरुले निर्णयगर्ने कुरा हो, उनीहरुले प्रशासनिक क्षेत्र पनि बनाउन सक्छन्।
भाषिक, सांस्कृतिक आधारमा किन हुन सक्दैन?
त्यो पनि हुनसक्छ। मधेशलाई टुक्राटुक्रा गर्नुभयो भने, हिजो जे हालत, थियो त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने समग्र मधेश एउटा हुन्छ। त्यसभित्र अलग अलग पनि हुनसक्छन्। मिथिला हुनसक्छ, भोजपुरी, अवधि, थारुवान जे पनि हुनसक्छ। यस सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीभित्र गम्भीर बहस चलिरहेको छ। के गर्दा मधेशीहरुको हित हुन्छ र नयाँ नेपाल निर्माणमा त्यसले सहयोग गर्छ, हाम्रो पार्टी यसैमा लाग्छ।स्वतन्त्र समाचार सेवा
मधेसमा अनेरास्ववियुका चुनौती	मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना – हृदयेश त्रिपाठी